भ्रामक समाचार लेख्नेलाई दश बर्ष जेल सजाय !
क्वालालम्पुर चैत १३। मलेसियाको सरकारले भ्रामक समाचार लेख्नेलाई बढीमा दश बर्ष जेल सजाय दिने कानुन बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । प्रधानमन्त्री नाजिब रजाकले आफु भ्रामक समाचारबाट धेरै पिडित भएको भन्दै
श्रम मन्त्री विष्टसँग परदेशबाट अपेक्षा
नेकपा एमालेका युवा नेता गोकर्ण बिष्ट श्रम तथा रोजगार मन्त्री बनेका छन । झण्डै ४० लाख नेपालीहरु बैदेशिक रोजगारका क्रममा छन । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशतको हाराहारीमा योगदान दिने
चर्चित भौतिकशास्त्री स्टीफन हकिङ्गको निधन
काठमाडौँ, फागुन ३० । चर्चित भौतिकशास्त्री स्टीफन हकिङ्गको ७६ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । उनको परिवारले बुधबार बिहान वक्तव्य जारी गर्दै हकिङ्गको क्याम्ब्रिजमा रहेको उनको निवासमा निधन भएको जानकारी
माल्दिभ्समा संकटकाल लम्ब्याउन राष्ट्रपतिको आग्रह
माले, फागुन ७ (रासस/सिन्ह्वा) । माल्दिभ्सका राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामिनले सोमबार यहाँको संसद्लाई देशमा लगाइएको संकटकालको समयावधि लम्ब्याउनको लागि अनुरोध गर्नुभएको छ । माल्दिभ्समा जारी राजनीतिक संकटकालीन अवस्था थप १५ दिन लम्ब्याउन
काठमाडौं, फागुन ६ । इरानमा एक यात्रुवाहक विमान दुर्घटनामा परेको छ। आइतबार बिहान राजधानी तेहरानबाट दक्षिणी सहर यसुजका लागि उडेको विमान दुर्घटनामा परेको अधिकारीहरुलाई उल्लेख गर्दै स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्।
अफगान सेनाको कारबाहीमा ३६ तालिबान मारिए
काठमाडौं, फागुन ६ । अफगानिस्तानको हवाई सेनाले शनिबार साँझ गरेको हवाई कारबाहीमा परी अफगानिस्तानको दक्षिणी कान्दाहार प्रान्तमा कम्तीमा ३६ जना तालिबान मारिएको समाचारमा जनाइएको छ । अफगानिस्तानको दक्षिणी प्रान्त कान्दाहारको मियावान्द
एनआरएन जोहोरलाई अरु भन्दा भिन्न बनाउँछु : अध्यक्ष अधिकारी
एनआरएन जोहोरको अध्यक्षमा भर्खरै रबिलाल अधिकारी निर्वाचित हुनुभयो । अध्यक्ष अधिकारीसँग संस्थालाई अगाडी बढाउने के छन् योजना ?, एनआरएन के हो ? एनआरएन किन र यसले कस्ता किसिमका काम कसरी
मलेसियामा आर एम २५००० राशी को गोल्डकप हुँदै
विपेन उलङगे मलेसिया माघ ८ । एकता र मित्रताकाे लागि फुटबल भन्ने मुल नाराका साथ अायाेजना हुन लागेकाे मलेसिया ब्यापि खुल्ला फुटबल प्रतियोगिता तेस्राे हिमालयन गाेल्डकपकाे तयारि भब्य रहेकाे हिमालयन
भुषाल बचाउको रकम सरकारलाई हस्तान्तरण : आमाले भनिन ‘अब छोराको मुख देख्न पाउने छु’
रामचन्द्र नेपाल काठमाडौं, माघ ६ । साउदी अरवको जेलमा ब्लड मनिको अभावमा जेल जीवन विताईरहेका नवलपरासीका थानेश्वर भुषाललाई नेपाल फर्काउने पहलले साथकता पाउने भएको छ । ब्लड मनिको अभावमा करीव चार
नेपाली गीतसंगीतका लागी मलेशियामा अवार्ड वितरण हुने
मलेशिया (क्वालालम्पुर), माघ ५ । मलेशियामा पहिलोपटक हिमालयन अन्तरराष्ट्रिय म्युजिक अवार्ड २०१७ हुने भएको छ । नेपाल र मलेशियाका व्यासायिक कम्पनीहरुको संयुक्त प्रायोजनमा चिनियाँ नया बर्षको सार्वजनिक बिदाको अवसरमा उक्त